Fangatahana lehibe amin'ny Huawei Watch | Androidsis
Afaka manampy bebe kokoa momba ny inona isika midika hoe Huawei ho an'ny tontolo Android tato anatin'ny taona vitsivitsy dia efa fantatsika izany mandefa fitaovana miaraka amin'ny sandam-bola lehibe, ary eto dia horaisinao ihany koa ny fampisehoana akanjo azo anaovana endrika kanto ary miaraka amin'ny endrika boribory izay toa ilay voafidy hanolotra ireo smartwatches mahatalanjona indrindra.
Ny Mobile World Congress dia nanararaotra nanakaiky ny fahatsapana atolotry an'ity Android Wear azo ampiasaina ity ary ampahany amin'ny fitaovany avy amin'i Huawei mihitsy. Ity smartwatch ity dia ny Huawei Watch ary izy io dia iray amin'ireo fitaovana Android Wear kanto indrindra ankehitriny izay manana endrika boribory efa hita amin'ny fampidirana hafa toa ny Moto 360 sy LG Watch Urbane ny tenany. Tahaka ity farany voalaza, Ny Huawei Watch dia lasa toy ny famantaranandro mahazatra tamin'ny androm-piainany miaraka amin'ilay endrika boribory izay tian'ny be loatra.
Huawei Watch famaritana ara-teknika
Rafitra fandidiana Android Wear
efijery 1.4-inch AMOLED Safira famahana 400 x 400 286 ppi
processeur Qualcomm 1.2GHz
Sela Mpandray Hafanana Gyroscope / accelerometer / tahan'ny tahan'ny fo sy barometatra
Extras Fanoherana IP57
Mba hanamarihana ny fikasan'i Huawei momba ny Watch azo ampiarina, ny filohany be dia amin'ny famolavolana metaly miaraka amina endrika boribory izay mitondra ny fiverenan'ny kilasika amin'ny fitaovana Android Wear. Io famolavolana io dia ahafahan'ny mpampiasa mifantoka amin'izay tena zava-dehibe, izay tsy inona fa ny efijery, noho ny ampahany amin'ireo zana-baravarana manify misy azy ary azo ampiasaina ho toy ny arofanina ho an'ny fehin-tanana manify. Satria ny mikasika antsika miaraka aminy dia tena zava-dehibe amin'ny fitafiana, satria eo an-tànantsika foana io, ny fahatsapana natolotry ny Huawei Watch dia tena tsara.
Mikasika ny kalitaon'ny fitaovany, izany Ny efijery safira dia mampiseho ny toerana tian'i Huawei alehan'ity fitaovana ity, ary inona no azo antoka fa hahatonga antsika hahita azy amin'ny vidiny lafo, ankoatry ny vao maheno tsaho momba an'io. Raha efa miresaka momba ny fitaovany izy, dia manaraka ny fitsipika hita amin'ny fitafiana hafa misy fampiasa amina sensor kely vitsivitsy ho an'ny fitaovana iray karazana ary mitovy amin'ny hita amin'ny endrika.
Satria tsy manana fampahalalana momba ny vidiny isika, dia afaka milaza izany ho avy amin'ity fahavaratra ity, ary izany raha fintinina, ny smartwatch Android Wear izay maka fanahy anao amin'ny farany hahafantaranao ny atao hoe fananana fitaovana amin'ity karazana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei Watch, smartwatch kanto misy Android Wear ary endrika boribory